(SOMALI) SCHEDULE FOR PICKING UP BELONGINGS
Tuesday, May 19, 2020 11:30 PM
Iyada oo la adeegsanayo taxaddarrada amniga sida xirashada gacmo gashiga iyo af-daboolka, shaqaalaha dugsiga ayaa soo ururin doona alaabooyinka ardayga oo ku ridi doona baco taas oo lagu calaamadin doono magaca ardayga, fasalka, iyo lambarka qolka.
Qoysaska waxaa loo xilsaarayaa maalin cayiman iyo waqti laga bilaabo Juun 3 - 5 si ay u qaadaan alaabtooda taasi oo ku salaysan magaca dambe ee ardaygaaga sida ku cad shaxda hoose. Qoysasku waxay ku imaan karaan markasta waqtigaas oo dhan sida ku cad shaxanka hoose.
Qoysaska leh in kabadan hal cunug oo iskuulkeena ah waxay helayaan dhammaan alaabooyinka carruurtooda isla maalintaas, xitaa haddii magacyadooda ugu dambeeya ay kala duwan yihiin. Taariikhda soo qaadashada waxay kuxirantahay cunugga magaciisu ugu dhawyahay bilowga alifbeetada, tusaale ahaan, hadii magacyada caruurtaada ay ahaayeen Jane Doe iyo Frank Smith, waxaad qaadan laheyd labadooda alaabtooda taariikhda iyo wakhtiga Jane loo qabtay oo ah : Juun 3 inta u dhaxaysa 9:30 iyo 11:30 am.
Si loo hubiyo qof walba nabadgelyadiisa inta hawshani socoto, qoysasku waxay ku jirayaan gaarigooda, shaqaalaha ayaa kuugu ridi doona alaabtaada xaga dambe ee gaadhiga. Fadlan hubi in sanduuqa dambe oo gaadhigu kuu bannan yahay. Sinabba looguma ogalaan doono qoysaska iyo ardayda inay galaan dhismaha gudihiisa. Qoysasku waa inay galaan goobta baabuurta la dhigto ee ku taal 'Dowling Avenue' una sii gudub barxada hore. Fadlan ku jir gaarigaaga. Shaqaalaha ayaa kuu keenaya alaabadaada. Fadlan la soco in qoysaska kale ay qaadanayaan alaabtooda isla mar ahaantaana waa inaad filaysaa waqti sugitaan ah maadaama gaadiidku ay khadka marayaan inta hawshani socoto.
Isla mar ahaantaana, tani waxay kuu noqon doontaa fursad aad u wanaagsan inaad ku soo celiso alaabada sida buugaagta maktabadda, buugaagta macallimiinta ama alaabada kale ee aad amaahatay. Ilaa iyo intaad ogtahay inaadan ka tegaynin iskuullada dadweynaha ee Minneapolis xilliga dayrta, ma aha inaad soo celiso kumbuyuutarrada iyo hotspot ee barashada masaafada waqtigan xaadirka ah. Haddii kale, u sheeg shaqaalaha inaad haysatid waxyaabo ay tahay inaad soo celiso, iyagaana kaasoo qaadi doona.
Markay shaqaaluhu u soo dhowaadaan gaarigaaga, fadlan hoos ugu deji daaqaddaada qadar yar si’aad u siiso magaca ardaygaaga una fur albaabkaaga dambe (baabuurka). Shaqaaluhu waxay istaagi doonaan masaafo aamin ah iyagoo tixgalinaya kala fogaanshaha bulshada.
Haddii aadan imaan karin dugsiga si aad u hesho alaabta ardayga sabab kasta ha noqotee, fadlan kaga tag farriin cod ah 612-668-4410 ama email u soo dir SusanJohnson@mpls.k12.mn.us. Fadlan ku dar macluumaadka soo socda markii aad nala soo xiriirayso:
Magaca ardaygaaga iyo magaca dambe.
Cinwaanka gurigaaga hadda ah.
Lambarka taleefanka ugu fiican ee lagula soo xiriiri karo.
FIIRO GAAR AH: Haddii aad uga tagto macluumaadkan taleefonkayaga, fadlan si tartiib ah oo waadax ah u hadal.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan la xiriir emaylka / lambarka kore.
Jadwalka loogu talagalay qoysaska inay soo qaataan alaabtooda
ARBACA, JUNE 3
Haddii magaca ugu dambeeya ee ardaygaagu uu ku bilowdo xarafkan :
KHAMIIS, JUNE 4
Haddii magaca ugu dambeeya ee ardaygaagu uu ku bilowdo xarafkan:
JIMCAHA, JUNE 5
Haddii magaca ugu dambeeya ardaygaagu ku bilowdo xarafka:
Fadlan wixii su’aal ah la xidhiidh Mustafa telefonkan: 612-986-8377